३४ खेलमा अपराजित इटाली युरो च्याम्पियन : रोनाल्डोलाई गोल्डेन बुट - Kantipath.com
इंग्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै इटालीले युरोकप फुटबलको उपाधि जितेको छ । आइतबार राति भएको फाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३-२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै इटालीले उपाधि जितेको हो । वेम्बली स्टेडियममा निर्धारित ९० मिनेट र अतिरिक्त समयको खेल १-१ गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो । पेनाल्टीमा इटालीले बाजी मार्यो ।
यस उपाधिसँगै इटालीले दोस्रो पटक युरोकपको उपाधि जितेको छ । यस अघि इटालीले १९६८ मा युरोको उपाधि जितेको थियो । इंग्ल्यान्ड भने पहिलो पटक युरोकपको उपाधि जित्न असफल भएको छ ।
खेलको दोस्रो मिनेटमा लुक शले गोल गर्दै इंग्ल्यान्डलाई अग्रता दिलाएका थिए । खेलको ६७ औं मिनेटमा लियोनार्दो बुनिचीले गोल गर्दै इटालीलाई १-१ गोलको बराबरीमा फर्काए । पेनाल्टीमा इटालीका डोमिनिको बेरार्डी, लियोनार्दो बुनिची र फेडेरिको बेर्नाडेस्चीले गोल गरे । आन्द्रे बेलोट्टी र जोर्गिन्होको प्रहार इंग्ल्यान्डका गोलकिपर जोर्डन पिकफोर्डले रोकेका थिए ।
इंग्ल्यान्डका ह्यारी केन र ह्यारी मग्वाएरले मात्र गोल गरे । मार्कुस राषफोर्डको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कदा जाडोन सान्चो र साका बाकुयोको प्रहार इटालीका गोलकिपर जियानलुइजी डोनारुम्माले रोकेका थिए ।
इंग्ल्यान्डमाथिको जितसँगै इटालीले ३४ खेलसम्म अपराजित यात्रालाई कायम राख्न सफल भएको छ । इटालीले यस अघि ८२ वर्ष अगाडीको आफ्नै कीर्तिमान भङ्ग गरेको थियो । इटालीले १९३५ को अक्टोबर देखि जुलाई १९३९ सम्म ३० खेलमा अपराजित रहेर कीर्तिमान बनाएको थियो ।
पोर्चुगलका कप्तान तथा फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल्डेन बुट अवार्ड जितेका छन् । सर्वाधिक गोलकर्ता बन्दै रोनाल्डोले गोल्डेन बुट अवार्ड जितेका हुन् । गोल्डेन बुट जित्ने क्रममा रोनाल्डोले ४ खेलमा ५ गोल गरे । उनले १ असिस्ट समेत गरे । उनले ३ गोल पेनाल्टीको सहायतामा गरेका हुन् । चार संस्करणको युरोकप खेलेको रोनाल्डोले पहिलो पटक गोल्डेन बुट जितेका हुन् । चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक शिकलाई पछि पार्दै रोनाल्डोले यस अवार्ड जितेका हुन् । प्याट्रिकले ५ खेलमा ५ गोल गरेका थिए ।
इटालीका गोलकिपर जियानलुइजी डोनारुम्मा १६ औं संस्करणको युरोकप फुटबलको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । इटालीलाई युरोकप दिलाउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका जियानलुइजी प्लेयर अफ दि टुर्नामेन्ट चुनिएका हुन् ।
फाइनलमा उनले दुई पेनाल्टी प्रहार समेत रोकेका थिए । स्पेनविरुद्धको सेमिफाइनलमा पनि उनी नायक बनेका थिए । जियानलुइजीले युरोमा ७ सय १९ मिनेट खेल्दै ३ क्लिन सिट निकालेका थिए । उनले प्रतियोगितामा ४ गोल व्यहोर्दा ९ पटक गोल बचाउ गरेका थिए ।
Previous Previous post: कार्यदलको १० बुँदे समझदारीमा माधव नेपाल असन्तुष्ट
Next Next post: बिहानै माधव नेपालको झड्का : २३ सांसद एकै ठाउँ छौ, हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न !
ब्राजिलका फरवार्ड जेससलाई अर्जेन्टिना विरुद्धको खेलमा प्रतिबन्ध
फुटबल रंगशालामा भाग दौड मच्चिंदा १७ जनाको मृत्यु
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली प्रस्थान
रोनाल्डो युरोपियन वर्ष खेलाडी बने
पीपीएल क्रिकेटमा हरायो चितवनले काठमाण्डौलाई, प्लेअफको सम्भावना !
साफ च्याम्पियनशिप: नेपाल र भारत भिड्ने
यस्तो बन्यो फिफा विश्वकप २०२२ को ‘लोगो’
कञ्चनपुरमा पहिलोपटक पशुमा लम्पी स्किन रोग देखाप-यो
संसद विघटन गल्ती थियो भन्ने ओलीले स्वीकार गरे एकता हुन्छ : डा. विजय पौडेल
ट्राफिक महाशाखाद्वारा हराएका २३ वटा बाईक हस्तान्तरण